Fanafihana miaro fandrobana sy vonoan’olona…: sazy henjana, gadra mandra-pahafaty no azon’ireo enin-dahy | NewsMada
Jiolahy anisan’ny nikoizana amin’ny fanafihana mitam-piadiana, fandrobana arahana vonoan’olona tokoa ireto enin-dahy niakatra fitsarana tao Toamasina, afakomaly, ireto. Ny sazy faran’ny henjana indrindra no navoakan’ny fitsarana nanamelohana azy ireo, noho izany, gadra an-terivozona mandra-pahafaty…
Naharitra adiny roa sasany ny fotoam-pitsarana ady heloka bevava tao amin’ny lapan’ny Fitsarana ambony Toamasina, afakomaly, izay nitsarana ny raharaha anenjehan’ny fitsarana an’i Mbehoto, 29 taona avy any Ihorombe, Inivitson, 21 taona avy any Ambovombe, Manandahy Bonne Fete Rodolphe, 33 taona avy ao Ambovombe, Amile Jean Martini, 31 taona avy ao Toamasina, Andrianandrasana Romuald, 20 taona avy ao Toamasina ary Jean Barson Victorien, 34 taona avy ao Mananara Avaratra (tsy tonga niatrika ny fotoam-pitsarana azy). Nafana ny adihevitra nandritra ny fotoam-pitsarana satria nandà ny fiampangana azy ireto voampanga ireto manoloana ny fifandaharana tamin’ireo mpitsara mpanao famotorana. Heloka anenjehana azy ireo ny fanafihana mitam-piadiana, izay voafaritry ny fehezan-dalàna famaizana laharana faha 379 – 381 sy vonoan’olona ary firaisana tsikombakomba tamina vonoan’olona sy fanafihana mitam-piadiana. Raha hiverenana ity raharaha ity, nitrangana fanafihana mitam-piadiana nataona andian-jiolahy tao amina mpandraharaha iray manana sambo, mpanao lavanila sy jirofo any Mananara Avaratra, ny 12 febroary 2020. Avy naka vola 32 tapitrisa Ar tamina tambajotran-tserasera mpikirakira vola izy, tamin’io fotoana io no narahin’ireo andian-jiolahy nirongo basy. Lasan’ireo mpanafika ny vola 32 tapitrisa Ar sy ny firavaka volafotsy teny an-tanany. Nahazo loharanom-baovao momba ity fanafihana ity ny polisy avy ao amin’ny kaomisarian’i Tanambao faharoa, notarihin’ny kaomisera Rakotovao Jean Christian. Nametraka ny vela-pandrika rehetra ahafahana misambotra ireo jiolahy ny polisy ka raikitra ny poa-basy nirefodrefotra, nandritra ny fifanenjehana nanomboka teo anoloan’ny paositra, araben’ny Fahaleovantena ka hatrany amin’ny boulevard Augagneur. Notifirin’ireo jiolahy ny mpamily iray, noteren’izy ireo hitondra hitsoaka tamin’ny fiara. Vokany, jiolahy iray maty rotiky ny bala raha polisy iray naratra voan’ny balan’ireo jiolahy. Nanao tohivakana ny fisamborana ireo jiolahy taorian’izay.
Mpiasan’ilay mpandraharaha ihany ny iray amin’ireo jiolahy…
Somary niteraka fifanjevoana nandritra ity fotoam-pitsarana ity ny tsy nahateo an’i Barson Jean Victorien, izay voalaza fa mpiasan’ilay mpandraharaha ihany. Niato mihitsy ny fitsarana ka nanontany ireo mpiandry fonja ny mpitsara amin’ny tsy nahatongavany niatrika ny fitsarana. Tsy afaka mandeha ny fitsarana raha tsy misy taratasy mazava ny antony tsy maha eo azy izao miaraka amin’ireo namany. Minitra vitsy taorian’izay vao fantatra fa nahazo fahafahana vonjimaika izy, ny 14 marsa 2021 teo ka nahatonga ny fitsarana nanao fanamarihana amin’ny antony nanomezana azy izany kanefa jiolahy raindahiny. Taorian’ny fifandaharana, tsy nisorona ny mpitsara namoaka ny sazy faran’izay henjana mandra-pahafaty. Namoahana didy fisamborana kosa i Barson Jean Victorien ka avy hatrany dia miditra am-ponja sy voaheloka asa an-terivozona mandra-pahafatiny koa.